Inkungu eshinyeneyo ilibazisa ngaphezulu kwekhulu leenqwelomoya kwizikhululo zeenqwelomoya zaseMoscow
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo » Inkungu eshinyeneyo ilibazisa ngaphezulu kwekhulu leenqwelomoya kwizikhululo zeenqwelomoya zaseMoscow
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • iindaba • abantu • Xanduva • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Inkungu eshinyeneyo ilibazisa ngaphezulu kwekhulu leenqwelomoya kwizikhululo zeenqwelomoya zaseMoscow.
Ekuseni, iFederal Air Transport Service yaseRussia yabika ukuba ngaphezulu kwe-30 iinqwelomoya ziye zathunyelwa kwezinye iindawo zeenqwelomoya eMoscow ngobusuku obudlulileyo.
Inkungu enzima iphazamisa iinqwelomoya ezisuka kwisikhululo seenqwelomoya saseMoscow iSheremetyevo, Domodedovo kunye neVnukovo.
Iinqwelomoya ezingaphezu kwekhulu ziye zamiswa kwisikhululo seenqwelomoya eMoscow yinkungu eshinyeneyo namhlanje.
Izikhululo zeenqwelo moya zichaze iimeko ezisezantsi zokubonakala njengesizathu sokulibaziseka kwenqwelomoya kunye nokurhoxiswa.
Iinqwelomoya ezingaphezulu kwe-100 ziye zarhoxiswa okanye zalibaziseka kwizikhululo zeenqwelo moya zaseMoscow ngenxa yenkungu enzima.
Sheremetyevo, KwiKomani kunye nezikhululo zeenqwelomoya zaseVnukovo zibhengeze ukulibaziseka kweenqwelomoya kunye nokurhoxiswa emini emaqanda, ngenxa yenkungu eshinyeneyo egqume ikomkhulu laseRussia.
In Sheremetyevo, ngaphezu kwe-30 iindiza zalibaziseka (njenge-11: i-50 ixesha laseMoscow), e-Domodedovo - ngaphezu kweenqwelo ze-25 (ukusukela ngo-12: 15 ixesha laseMoscow), e-Vnukovo - ukuya kwii-47 iindiza (ukusukela ngo-12:10 ixesha laseMoscow) . Kwakhona kwaxelwa ukuba ubuncinane iinqwelomoya ze-20 zithunyelwe kwenye indawo yeenqwelomoya, kuquka neDomodedovo.
"Ngomhla we-2 kaNovemba (nge-12: 10 ixesha laseMoscow) iinqwelo-moya ze-47 zalibaziseka (ixesha elingaphezu kweyure) eVnukovo ngenxa yeemeko eziphantsi ezibonakalayo," satsho isikhumulo sezindiza.
“Ukususela ngo-00:00 ukuya ku-12:15 isikhululo seenqwelomoya sasebenza malunga neenqwelomoya ezili-120 zokufika nokuhamba. Iinqwelomoya ezili-16 zithunyelwe kwakhona KwiKomani zisuka kwezinye izikhululo zeenqwelo moya zaseMoscow, iinqwelomoya ezingama-23 ziye kwezinye iindawo zeenqwelomoya, "inkonzo yeendaba yaseDomodedovo yabika.
Ekuseni, i-Federal Air Transport Service yabika ukuba ngaphezulu kwe-30 iinqwelomoya ziye zathunyelwa kwezinye iindawo zeenqwelomoya eMoscow ngobusuku obudlulileyo.
Ngobusuku bukaNovemba 1-2, inkungu eshinyeneyo yagubungela iMoscow. Ngokweziko le-Hydrometeorological Centre yaseRashiya, inkungu kwikomkhulu ivela kwimvelaphi yendalo kwaye yavela ngenxa yokuphola okubukhali komoya. Kulindeleke ukuba isasazwe ngentsimbi yesi-2:00 emva kwemini eMoscow nangentsimbi yesi-3:00 emva kwemini kummandla waseMoscow.
I-FAA iphakamisa imingcipheko ye-5G 'kwinqwelomoya eneealtimeter ezingavavanywanga' January 13, 2022